विवाहको निम्तो बाड्न हिँडेकी रमिताको टिपरले ज्यान लिएपछि प्रेमीले लेखे सबैलाई रुवाउने यस्तो मार्मिक स्टाटस — Sanchar Kendra
विवाहको निम्तो बाड्न हिँडेकी रमिताको टिपरले ज्यान लिएपछि प्रेमीले लेखे सबैलाई रुवाउने यस्तो मार्मिक स्टाटस
काठमाडौँ । डेढ बर्ष अगाडी मात्रै कञ्चनपुरका प्रकाश टेर र बैतडीको गुरुखोला घर भई कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका गोवरीया बस्दै आएकी रमिता भट्ट (रोशनी) ले भागी विवाह गरेका थिए। भागी विवाह गरेपनि दुवै पक्षको परिवारलाई सहमतीमा ल्याउन प्रकास र रमितालाई सहज थिएन्।
जसका कारण रमिताले प्रकासको नामको सिन्दुर समेत हाल्न सकेकी थिईनन्। भागी विवाहको डेढ बर्षपछि दुवै परिवारको सहमतीमै माघ १३ गते विवाह गर्ने निधो भयो। प्रकास र रमिताको सबैभन्दा खुसीको दिन पनि नजिकै आईरहेको थियो। उनीहरु दुवै विवाहको तयारीमा जुटेका थिए।
तर बुधवार आफ्नै विवाहको कार्ड बाडिरहेकी रमितालाई कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर चम्मन चोकमा से १ क ८८७ नम्बरको टिप्परले ठ’क्कर दियो। टि’प्परले ठ’क्कर दिएपछि रमिता घटनास्थलमै सधैका लागि अस्ताईन्। यो घटनाले रमितासंग भागी विवाह गरेका प्रकास टेर अहिले सबैभन्दा पीडामा छन्।
यस्तो छ प्रकाशले लेखेको मार्मिक स्टाटस – तेरो लागि रातो साडी ल्याइदिएको छु नि बूढी ! पर्सि हाम्रो बिहे हो, कहाँ गाछस् छिटो आइज न । मेरो एक चिम्टी सिन्दुरको लागि तैँले आफ्नो फ्यामिली, लाइफ सब छाडेर मेरो साथ दिइस्, तर मलाई बीचमै छोडेर किन गइस् भन् त । एक्लै यत्रो लामो बाटो कसरी हिँडु म हम् ? कति सपनाहरू थिए, तैँले किन धोका दिइस् । मैले भनेको होइन तलाईं केही हुनुभन्दा पहिला म नै नरहुँ भनेर, तँ अगाडि किन गइस् मलाई छाडेर ? म एक्लै के गरौं, कहाँ जाऊँ भन् त ? आइज न बिहे गरौंला नि ! यो बिहेको साडीमा मेरो सिन्दुर तेरो सिउँदोमा हेर्ने सपना छ मेरो । म नि छिट्टै आउँछु तँ सँगै बूढी, नभुलेस् है मेरो वेट गरेस् । चखेवाको जोडी जस्तै थियो नि हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफैँ आउँछु ।